Filtrer les éléments par date : samedi, 27 novembre 2021
samedi, 27 novembre 2021 21:00
Ny andrefesana ny fampianarana
Raha mbola mankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fanasana tanana isika, dia mbola tsy matotra izany ny fampianarana eto amintsika.
Olona avy nandeha WC ni caca ve no mbola ampianarina hoe manasà tanana, dia fampianarana inona izany no nampitaina taminy.
Bonne nuit o
samedi, 27 novembre 2021 17:04
OneWeb : 650 zana-bolana no ampita ny internet
Ny mahazatra hatramin'izay dia ny fampiasana cable alevina ambany tany, ampidinina anaty ranomasina, ary mampifandray an'izao tontolo izao amin'ny internet.
Natao izany mba anafaingana sy tsy aha tapatapaka ny fifandraisana.
Ny fifandraisan-davitra miankina amin'ny zanabolana tokoa manko somary ela, satria onde électromagnetique no alefa (300 000km/s) ary andrasana mandroso sy miverina avy amin'ny satellite izy, nefa ny hazavana izay mitondra ny donnée, entina anaty cable na fibre optique, dia mahatratra 300 000km/s ihany koa, fa mandeha tsy miverina.
Mbola eo ihany koa ny rahona sy ny orana ary ny toe-trandro izay manamatroka ny fifandraisana raha satellite.
Lafo anefa izay fametrahana sy fikojakojana cable alevina ambany tany sy any anaty ranomasina izay, ary mivoatra hatrany ny teknolojia.
Teo anelanelan'ny 20-26 novambra 2021, dia tafakatra 258 ireo tranga vaovao nahitana ny otrikaretina Covid-19.
Analamanga no tena betsaka tratra 114, Vakinankaratra 54, Menabe 30, Anosy 27, Matsiatra ambony 23, Ihorombe sy Sava ary Atsinanana 2 avy, ary 1 avy Vatovavy Fitovinany, Melaky, Itasy, Amoron'i Mania.
13 kosa no marary mafy na formes graves, ary tsy nisy ny maty, fa 148 no sitrana.
Nahatratra 967 ireo namoy ny ainy tamin'ny resaka Covid-19 ity teto Madagasikara, tamin'ireo 44 330 voamarina nitondra ny otrikaretina.
42 915 kosa ireo sitrana, ary 283 728 ny isan'ny fitiliana hatramin'izay, raha 5879 ny fitiliana natao ny herinandro nodiavina ity.
Antanambao Manampontsy : Hamboarina ny lalana RNT20, tonga ny gropy ho an'ny JIRAMA …
Hatomboka ny asa fanatsaràna ny lalana RNT20 mampitohy an'Antanambao Manampontsy sy Ilaka-Est mirefy 48km eo. Ny Faritra Atsinanana no hisantatra ny asa, mandra-piandry ny asa lehibe hataon'ny Minisitera mpiahy.
Nahazo milina mpihary herinaratra ny JIRAMA, ary notolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo Kaominina maro aty an-toerana.
Tsy diso anjara fa nahazo milina fanjairana ihany koa ireo fikambanam-behivavy.
Maromaro moa ireo fotodrafitr'asa tanterahina aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Nojerena ny asa làlana rarivato eto an-tampontanàna izay mirefy 2km, ary koa ireo tetik'asa tanterahina ankehitriny toy ny CEG manara-penitra , Hopitaly manara-penitra izay andalam-pahavitana.
samedi, 27 novembre 2021 14:44
CENI vaovao : Vao hanomboka dia efa handeha amin’ny tsy fanarahan-dalana ?
Hisokatra, ny 1 desambra, izany hoe afaka andro vitsy ny fanitsiana isan-taona ny lisi-pifidianana, ho fampiharana ny andininy faha 33 amin’ny lalana fehizoro 2018-008 momba ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsipankevi-bahoaka.
Araka ny andininy faha 39 amin’ny lalana 2015-020 mifehy ny rafitra mahaleotena mikarakara ny fifidianana na ny « Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) » dia ity rafitra ity no mikarakara sy manatanteraka miaraka amin’ny rafi-panjakana ny fanitsiana ny lisi-pifidianana.
Andro vitsy mialoha izany anefa dia tsy mbola mipetraka ny rafitra maharitra ao amin’ny CENI izay ahitana ireo « Commissaires électoraux » vaovao.
Efa andro maro anefa no namoaka ny didim-panjakana manamarina ny nahavoafidy na naha-voatendry ireo mpikambana 9 vaovao ao anatin’ny CENI ny filoham-pirenena araka ny andininy faha 16 amin’ilay lalana 2015-020.
samedi, 27 novembre 2021 10:38
Ampanihy : Nahazo fanampiana ireo voafonja tratry ny tsy fanjarian-tsakafo
Maro ireo voafonja no efa tena reraka ao amin’ny fonjan’Ampanihy. Tsy misy fianakaviana miahy, tsy misy manatitra sakafo ny ankamaroan’izy ireo.
Miisa roanjato sy folo dimy amby (215) ireo voafonja ireo, ka valopolo sivy amby (89) ireo tena tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Nisy ny fizaram-baovao nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana IMBIKY Herilaza tao anatin’ny taratasy laharana faha-845-MJ/SP/21 ny 22 Oktobra 2021 mahakasika ny filàna fanohanana sy fanampiana vonjy maika ireo voafonja tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Nandray ny andraikiny avy hatrany ny BNGRC tamin’ny alàlan’ny CCOK Ampanihy, izay notarihin'ny Tale Jeneraliny, ELACK Olivier Andriakaja. Nisy ireo fanampiana nentina ho an’ireo voafonja ireo, nahitana vary, menaka, katsaka, voamaina, sira, … sy fitaovam-pidiovana toy ny barika fitehizan-drano, rano, savony, …
Kamiao be iray mpitatitra vato no nivarina an-tanimbary, teo Soaray Ambohipano, Kaominina Manandona, omaly zoma 26 novambra 2021 tolakandro.
Araka ny filazan'ny nanatri-maso dia hisongona Sprinter amin’ny lala-mahitsy sy mazava tsara amin’ny lalam-pirenena faha-7 ilay kamiao no nivarina ambony ambany tany an-tanimbary vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily.
Tsy nisy aina nafoy, saingy samy naratra avokoa ny mpamily sy ny olona nentiny. Simba ny kamiao, niparitaka ny entana.
Efa nahazo fitsaboana ireo maratra, ary tsy misy atahorana ny ainy.
samedi, 27 novembre 2021 09:54
Betafo Vakinankaratra : Zaza 10 taona maty vokatry ny fanomezana fanafody diso fatra
Zaza iray, 10 taona, kilasy “6eme” ao Betafo, no namoy ny ainy ny harivan’ny alakamisy 25 novambra 2021 vokatry fanomezana azy fanafody diso fatra.
Nisy fizarana fanafody kankana sy takilodrano, nataon’ny mpiasan’ny fahasalamana tamin’ny sekoly tao Betafo ny talata 23 novambra. Ny alin’ny nihinanana ireo fanafody dia nisy ankizy vitsivitsy nandraiky nanavy tsy nahazaka ka ny telo niditra hopitaly tao amin’ny hopitaliben’i Betafo.
Mafimafy ny aretiny na nisy nafindra notsaboina tamin’ny klinikan-dry masera ao Antsirabe renivohitry ny Faritra Vakinankaratra ny alarobia. Namoy ny ainy ilay zaza 10 taona ny alakamisy hariva.
Araka ny loharanom-baovao dia nihoatra ny fatra tokony nomena ilay zaza ny fanafody nohaniny, ka niantraika mafy tamin’ny atiny.
Efa kamboty ray ilay zaza, izay efa PDS ny Kaominina ambonivohitr’i Betafo teo aloha.